Okraina: Fitorahana Bilaogy Momba Ny Nofy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2011 5:58 GMT
Mikendry ny hampivondrona ireo marary ho ao anatin'ny hetsika fampihenana ny ratra ireo mafana fo avy ao anatin'ny Fikambanan'ireo Mpisolovavan'ny Fitsaboana Fanolo any Okraina [ru] ary mino fa mety ho fitaovana lehibe amin'ny fampahafantarana ny fitsaboana fanolo ny fitorahana bilaogy ary hiarovana ny zon'ny marary. Vao haingana izay dia nanokatra fizarana iray vaovao ny vohikalan'ity Fikambanana ity izay mirakitra ny bilaogin'ireo mafàna fo ao anatin'ny Fikambanana avy any amin'ireo faritra samy hafa any Okraina. Amin'izao fotoana izao dia manana bilaogy 9 io fizarana io izay hizaran'ireo olona miankin-doha amin'ny rongony, mpiasan'ny fitsaboana, sy ireo mpiasa sosialy ny tantarany manokana, ireo tatitra, ary ireo vaovao avy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa fitsaboana fanolo any amin'ny tanànan'izy ireo sady hamoahan'izy ireo ny eritreriny, ny heviny, sy ny nofinofiny.
Ny mpitoraka bilaogy Yura dia mizara tantara iray momba ny hetsiky andro iray niarahan'ireo marary sy ireo mpiasa tao amin'ny toerana fanaovana fitsaboana fanolo ao Zhytomyr nanadio ny faritra manodidina ny toeram-pitsaboana. Nanoratra izy:
Tsy mitatitra ny zavabitany ihany ireo mpitoraka bilaogin'ilay Fikambanana fa manoratra momba ireo fanamby atrehan'izy ireo. Ny mpitoraka bilaogy, Aleksandr Voronov, avy ao amin'ny Chernihiv dia manainga olana amin'ny fampiarahana ny fitsaboana fanolo sy ny asa mahazatra. Toa tsy mora izany satria mila mandany ora vitsivitsy isan'andro ireo marary amin'ny fankanesana any amin'ny toeram-pitsaboana mba hahazoany ireo fanafody. Miantso ireo mitovy aminy i Aleksandr mba hiray hina ary hanova izay zava-misy izay. Namoaka[ru] izy hoe:
Ny mpitoraka bilaogy Viktoria ao amin'ny Kirovohrad dia nizara ny tantaran'ny fananganana vondrona iray mpanohana ireo marary tsaboina amin'ny alalan'ny fitsaboana fanolo izay efa nonofinofisiny hatry ny ela. Ity ny zavatra nosoratany momba ny fihaonana voalohan'ny vondrona: